Nanapa-kevitra ny mpitantana ny tranoben’ny Tantsaha fa hidina any amin’ny distrika sy kaominina eto Ananalamanga hampahafantatra ity rafitra eo anivon’ny fanjakana ity. Inona marina ny tranoben’ny Tantsaha? Hidina any amin’ny distrika izy ireo hanazava ny asan’ny tranoben’ny Tantsaha, mbola tsy nisy hatramin’izay. Aorian’izay, tokony hiantso azy ireo ny kaominina isanisany rehefa hametraka tetikasa sy paikady ho an’ny fampandrosoana. Tsy mety manan-karena ny tantsaha malagasy satria tsy any amin’ny tokony ho izy ny asa atao any ambanivohitra ka eo ny tranoben’ny Tantsaha hanoro lalana, toy ny fametrahana teknisianina hiara-hiasa amin’ireo tantsaha, hanome fanofanana hanatsarana sy hampitombo ny vokatra.
Vonona ny vahoaka amerikanina hanampy ny Malagasy hiadiana amin’ny tsy fanjarian-tsakafo ka nanokanany tetibola 90 tapitrisa dolara. Nisy ny fihaonana teo amin’ny minisitry ny Fambolena, ny fiompiana, ny jono, Ranarivelo Lucien, sy ny ambasadaoro amerikanina, i Michaël Peter Pelletier, nifampiresahan’ny roa tonta ny amin’izay tetikasa lehibe hovatsin’ny fanjakana amerikanina vola hiadiana amin’ny tsy fanjarian-tsakafo. Tetikasa azo antoka fa hanatsarana ny fambolena, ny fiompiana, ary ny jono. Hanomboka amin’ity taona ity izany fa nojerena ihany koa ireo taloha efa nifarana, nahitam-bokatra ary hotohizana.
Nataon’ny CRS (Catholic Relief Service), ny ONG amerikanina, tany Fianarantsoa ny faran’ny herinandro teo, ny fampirantina momba ny fampiofanana tanora, andiany faha-7. Nahasarika tanora maro io fampirantina io avy amina ivontoeram-piofanana samihafa any amin’ny faritra Amoron’i Mania sy ny faritra Matsiatra Ambony. Tafiditra ao anatin’ny fandaharanasan’ny CRS ny fihaonana amin’ny tanora toy izao hanomanana azy ireo hahitany asa sy hahafahany mamorona asa. Betsaka ny tanora tsy anasa ankehitriny ka noho izany indrindra ny hampidiran’ny CRS azy ireo ao anatin’ny tontolo vaovao. Hanaovana tombanezaka izay vita hijerena ny fanatsarana ny andiany manaraka.